Ukuphikisana nembali kunye nokungena ngaphakathi | Martech Zone
Ukuphikisana ngeMbali kunye nokuNgena ngaphakathi
NgoLwesihlanu, Matshi 26, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 UErik Deckers
Ndandinencoko enomdla nomhlobo wam, UChad Myers weNtengiso yeHats ezi-3, sixoxa ngokuba uqoqosho lwethu kwezolimo kunye noHlaziyo lwezoShishino zikhokelele njani kwindlela yethu yokusebenza yanamhlanje Njenge Iikhibhodi zethu zeQWERTY zekhompyuter . izigqibo zabasebenzi nezokusebenza. Kwaye azisebenzi ngokufanelekileyo.
Uqoqosho lwezoLimo luyichaphazela njani imisebenzi yethu
Xa ujonga ii-Baby Boomers kunye nonxibelelwano losapho lwabo kwezolimo, umntu om-1 kwaba-4 waseMelika ngandlela thile wayexhumeke kwifama, ihlala ifama yosapho. Emva phayaa, kwanamhlanje, uvukile ekuphumeni kwelanga, wasebenzela ukutshona kwelanga. Awungekhe usebenze ebusuku, kuba amasimi ayengakhanyiswanga kwaye iitrektara zazingenazo izibane zangaphambili. Usebenze emini, kuba ooyise babesebenza emini, njengooyise, kunye nooyise ngaphambi kwabo. Ngokusisiseko, okoko saba nezolimo kulo mhlaba, ubusebenza emini kwaye ulele ebusuku.
Kule mihla, akunyanzelekanga ukuba siyenze loo nto. Sinezibane zombane, siyakwazi ukusebenza kuwo onke amaxesha, kwaye sinxibelelane kwangoko nge-Intanethi ekhawulezayo.
Inguquko kwiMizi-mveliso iyichaphazela njani iMikhwa yethu yokuSebenza
Ukukhawulezisa ukuya ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800 nasekuqaleni kweminyaka yee-1900, xa iifektri zaphakama kwaza kwafika abantu bevela ezixekweni befuna ukuya kusebenza ezidolophini. Ngoku, ukuba kukho into efuna ukwakhiwa, yenziwe kumzi-mveliso. Kwaye kuba abantu bevela ezifama, kuye kwafuneka basebenze phakathi kwe-8 kunye ne-5 kwakhona.
Kodwa ngoku, ngenxa yokuba umzi-mveliso ukwindawo enye, umsebenzi kwakufuneka wenziwe esizeni. Izixhobo zakho zazikhona. Imveliso yakho ibikhona. Ubuyinxalenye yenkqubo, kwaye ukuba ubungekho, inkqubo ayiphumelelanga. Kwakubalulekile ukuba ubonakale.
Kule mihla, kusalindeleke ukuba sibonise. Umsebenzi wethu wenziwa kwisakhiwo seofisi. Kufuneka sidibane nabantu ngeziqu zethu. Kufuneka sihlale kwiifama zethu ezincinci, kwaye sigcine imveliso yethu. Uyinxalenye yenkqubo, kodwa Nantsi into abaphathi abangayiqondiyo okwangoku Inkqubo ayizukusilela ngenxa yokuba ungekho kwisakhiwo.
Inxalenye yesizathu kukungathembeki kwicala labaphathi. Ukuba abanakho ukusibukela, abazi ukuba siyawenza na umsebenzi. Bakholelwa ekubeni sinokuchitha ixesha elininzi ngokuzonwabisa endaweni yokwenza umsebenzi. Ungaze ukhathalele ukuba banokuyixela loo nto, xa abantu bengafikeleli kumhla obekiweyo kwaye imveliso iphezulu okanye iphantsi, nokuba abantu bakuloo ndawo. Kodwa ngasizathu sithile, abaphathi bacinga ukuba abantu kufuneka babekhona ngalo lonke ixesha, okanye akukho nto iya kwenziwa.
Ingxaki yeXesha lama-21 ebangelwa yiNkulungwane ye-19 yokuCinga
Uninzi lweenkampani kunye neearhente zikarhulumente zisacinga ngokwenkulungwane ye-19 xa kufikwa kumaxesha amkelekileyo okusebenza. Wena kumele ube se-ofisini ukususela ngo-8: 00 kusasa ukuya ku-5: 00 emva kwemini. Awuvumelekanga ukuba usebenze ekhaya, kwaye awuvumelekanga ukuba usebenze ukususela ngo-9: 00 - 6:00, okanye Nakanye! 10: 00 - 7: 00.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa ndandisebenzela i I-Indiana State iSebe lezeMpilo, Bendinoxanduva lwesicwangciso esiza kuthi sisisebenzise ukuba ifan flu iye yahlasela iUnited States. Nangona kunjalo, uninzi lwayo lujikeleze abantu abakwaziyo ukusebenza ekhaya. Wonke umntu walithanda icebo kwaye wathi yile nto kanye besiyifuna.
Ndathi, "kuhle." “Kufuneka siyisebenzise amatyeli aliqela, kwaye siqiniseke ukuba wonke umntu uyayisebenzisa. Oko kuyakuvumela abasebenzi abafanelekileyo ukuba basebenze iikinks, baqiniseke ukuba banokufikelela kwi-Intanethi, kwaye yonke itekhnoloji yethu iyasebenza. Ngale ndlela, xa siyenza, asibizi sonke isebe le-IT ngosuku lokuqala. ”
“Hayi, asifuni kuyenza loo nto,” yatsho impendulo. “Sifuna wonke umntu asebenze apha. Asenzi ngocingo ngocingo. ”
Yayiyiyo leyo. Ukuphela kwengxoxo. Asenzi ngomnxeba. Elona sebe likhulu kurhulumente welizwe, isebe elijongene nokuphendula komkhuhlane kurhulumente, kwaye khange “zitye ukutya kwenja yethu. ” Ke, akukho kuvavanywa, kungoko kukhubaza impendulo ye-arhente yonke xa ixesha lifikile.
Isisombululo sekhulu lama-21
Andikhuselekanga nakolu hlobo lokucinga. Njengomnini weshishini, bendingenaso ishedyuli yomsebenzi oqhelekileyo ngaphezulu konyaka. Ndifika eofisini emva kwexesha, kuba ndihlala kude kube sebusuku, ngesiqhelo malunga no-2: 00.
Kodwa ndiziva ndinetyala xa ialam ikhala ngo-8: 00, kwaye ndicinga, “Bekufanele ukuba sendiseofisini,” nokuba umzimba wam usongele ngokundinyanzela ukuba ndilele isiqaqa.
Nangona kunjalo, owona msebenzi wam ndiwenza ngokuhlwa nasebusuku. Ndiqhuba ndisiya eofisini ngeeyure ezingezizo, oko kuthetha ukuba ndisebenzisa irhasi encinci. Ndichitha ixesha lam Ukungena ngaphakathi kwiivenkile zekofu okanye ikhefi encinci. Singagcina malini ipetroli ngonyaka ukuba abasebenzi banokuhlengahlengisa iishedyuli zabo ezise-ofisini ukuze zithelekise ezona shedyuli zomsebenzi zibalaseleyo?
Ukuba iinkampani zinokuphuma kule ndlela yokucinga "asinakukuthemba", kwaye zifumane iindlela ezintsha zokuvumela abasebenzi basebenze ekhaya, sinokunciphisa ukusebenzisa kwethu amafutha. Singazinciphisa iindleko zokusebenzisa, kunye nearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kunye neendleko zokuqeshisa, ukuba sinendawo encinci yokubambisana. Khawufane ucinge xa ​​usebenzisa isakhiwo esishumi kwisayizi yokuqala, ungagcwaliswanga ngaphandle kwamagumbi okuhlangana, amagumbi enkomfa, kunye nezinye iityhubhu zabantu abafuna ukuchitha ixesha eofisini ngaphambi okanye emva kwentlanganiso.
Ukuba iinkampani kunye neearhente zikarhulumente zinokujoyina inkulungwane yama-21, sinokwenza izinto ezithile ezimangalisayo. Kude kube lelo xesha, siya kuguqula ii-wrenches zethu kwimigca yokuhlangana, kwaye siwadibanise amahashe silime amasimi.
tags: UkuhambaUmakhiiiyure zomsebenziiiyure zomsebenziukusebenza ekhaya
Amandla e-ALT kunye ne-TAB
Mar 27, 2010 ngo-11: 03 AM
Iposi eyoyikisayo, uErik. Ndingadibanisa ukuba ndiyakholelwa ukuba uninzi lweengxaki lubangelwa kukungaqondi kweli lizwe ukuba "Buyintoni ubunkokheli". Uninzi lweenkokheli ezingenamava endidibana nazo zikholelwa ukuba ngumsebenzi wazo 'ukulungisa' abantu kunye neenkqubo. Ngenxa yoko, bajolise kokubi… iimpawu ezimbi zabaqeshwa babo, imiba emibi ngeemveliso kunye neenkonzo zabo, imiba emibi ngeshishini labo.
Kuhlala kubakho into 'yokulungisa' nomntu wonke kunye nalo lonke ishishini. Ayingomsebenzi wenkokeli leyo. Inkokeli kufuneka icinge ngendlela yokuyivelisa italente kubasebenzi bayo, indlela yokusebenzisa amandla eemveliso zabo kunye neenkonzo, kunye nendlela yokusebenzisa izinto ezintle ezenziwa lishishini labo ukuze zikhule.
Ngelishwa, sikhuthaza abantu kwinqanaba labo lokungakwazi ukusebenza. Asiboneleli ngabaphathi bethu okanye iisuphavayiza NALuphina uqeqesho ngendlela yokuphatha abantu ngokufanelekileyo. Kubi kakhulu!
Mar 29, 2010 ngo 8:09 PM
Kuvakala ngathi ufuna ukusebenza kwiROWE 🙂